Berlọ ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ nke Republic of → AKWESKWỌ obodo
Ọ bụ ezie na, onye nzi ulo oru bụ ọrụ na-enweghị akwụkwọ nke nwere ike iweta ọtụtụ afọ ojuju na uru anụ ahụ, mana ụzọ ịmalite ọrụ dị ka onye na-ese ụkpụrụ ụlọ abụghị ihe dị mfe ma ọ bụ mkpụmkpụ. Na mgbakwunye na ọkwa doro anya nke ọmụmụ na ọmụmụ kpụ ọkụ n'ọnụ, onye na-achọ ụkpụrụ ụlọ ga-esokwa IARP (Berlọ ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ nke Republic of Poland).
Esi ghọọ onye na-ese ụkpụrụ ụlọ?
Enwere ike inweta aha injinia ụlọ mgbe emechara usoro ọmụmụ izizi mbụ. A na-enweta akara ugo mmụta nna ukwu na engineer engineer mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ ọmụmụ nke abụọ. Agbanyeghị, aha ahụ anaghị enye gị ikike ịrụ ọrụ ahụ ozugbo. Dị ka iwu Polish si kwuo, naanị onye nọ na ndepụta nke Chamberlọ Ndị Nhazi ụlọ nke Republic of Poland bụ onye na-ese ụkpụrụ ụlọ nwere ike ịrụ ọrụ ahụ. IARP bụ naanị ọnụ ụzọ ọrụ maka onye ọchụnta ego na-achọ ịmecha ọrụ azụmaahịa mbụ ya.
Lee kwa: Ọ B IFR IF na IFE KAR DesignR Design 2020 maka akara Metalco maka ebe nchekwa bọs na-emekọrịta ihe, nke bụ akụkụ nke ọrụ SMART CITY project.
Chamlọ ndị na-ahụ maka ihe owuwu nke Republic of Poland bụ ahụ ọrụ nke arụ ọrụ kachasị na ya bụ nchekwa nke oghere, na nke ka nke, ụlọ ọrụ a na-ahụta ka ọhaneze. Na mgbakwunye, IARP na-ahụ maka arụmọrụ ziri ezi nke ọrụ teknụzụ ejiri na ewu ụlọ na-enyochakwa njikwa amamịghe nke ejiri rụọ ya na ọrụ ụlọ ọrụ ahụ. N'ezie, nlekọta a na-ekpuchi naanị ndị otu ụlọ ọrụ nke Architects nke Republic of Poland. Maka nke a, ọ dị ezigbo mkpa maka nwatakịrị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ nke chọrọ ime ihe mbụ ya ahia oru ngoisonye na IARP.
Ihe aga-eme na ọrụ thelọ nke Architects nke Republic of Poland
Berlọ ndị na-ahụ maka ụkpụrụ ụlọ nke Republic of Poland rụkwara ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ, nke gụnyere, n'etiti ndị ọzọ: idobe ọrụ nke onye na-ese ihe dị ka onye nweere onwe ya, ichebe aha nke IARP Architect, ịzụlite ọtụtụ ụkpụrụ metụtara arụmọrụ nke ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ, na-arụ ọrụ na iwu yana ịgbanwe ụkpụrụ maka ụgwọ maka ndị otu, yana chọpụtakwa iwebata mmemme dakọtara na mmemme EU na mahadum ndị Poland.
N'ime arụ ọrụ ndị ọzọ, IARP na-akwado ndị ọkachamara onwe ya nke ndị injinia na-ewu ụlọ. Chamlọ ndị na-ahụ maka ụkpụrụ ụlọ nke Republic of Poland na-arụkọ ọrụ ọnụ na ọtụtụ ndị ọzọ iji mezuo ebumnuche ya. Chamlọ nke Architects nke Republic of Poland abụghị naanị maka idobe ụkpụrụ na ụkpụrụ ọrụ, kamakwa ọ metụtara ọrụ agụmakwụkwọ, sayensị, ọdịbendị na ọrụ sayensị.
Agbanyeghị ọrụ IARP dị obosara, ekwesiri icheta na ebumnuche ya kacha elu bụ ichebe oghere na ije dị ka ọhaneze. A na-ahụ ụzọ maka mmemme na usoro dum nke IARP maka ebumnuche a, a ga-ahụkwa ihe omume niile dị ka mgbakwunye na ọrụ a bụ isi.
Ihe mebere IARP mejuputara Chamlọ ndị ode ala tinyere ndị isi, yana ọnụ ụlọ iri na isii nke ihe owuwu.
Ikike ndị ọrụ na ọrụ dịịrị ndị otu
Site na ndị òtù IARP, ndị otu nwere ike ịtụkwasị obi n'ihe ụfọdụ na ikike ndị ha na-agaghị enwe ike inwe na-ejikọtaghị ndị isi ụlọ. N'aka nke ọzọ, ịnwe ụlọ nke Architects nke Republic of Poland na-arụkwa ọrụ ụfọdụ.
Ọrụ ndị a gụnyere: idebe ụkpụrụ omume na ịrapara n'iwu ya, imekọ ihe ọnụ na oflọ nke Architects nke Republic of Poland, irube isi n'iwu na iwu metụtara ihe ọmụma ọrụ na uwe, na -eche mkpebi IARP na ịkwụ ụgwọ ndị otu oge niile.
Ndị otu IARP nwere ike ịtụkwasị obi na ikike na ikike ndị a: ha nwere ike iji ihe ndị na-enyere onwe ha aka na enyemaka iwu nke ụlọ ahụ, ha nwekwara ike ịtụkwasị aka na imeziwanye asambodo ọkachamara ha.
Kọmịịịịị N’ọdụ Mba
Mgbe ị na-ede banyere Chamber of Architects of the Republic of Poland, ọ gaghị ekwe omume ịkọwa Kọmitii Na-ahụ Maka Qlọ Ọrụ Mba. Ọ bụ ọrụ maka inye iru eru ọkachamara. Ọ bụ ahụ pụrụ iche nke akọwapụtara na ụkpụrụ nke ime ụlọ ahụ. Obi abụọ adịghị ya, onye ọ bụla na-atụ anya ụkpụrụ ụlọ na-achọ inweta iru eru ya ga-arụ ọrụ na Kọmitii Asambodo Mba. Na mgbakwunye, ọrụ nke Kọmitii Na-ahụ Maka Asambodo na-agụnye nlekọta nke ọrụ nke kọmitii nhọpụta, yana Iwu na ụkpụrụ akọwapụtara n'ime ya ga-arụ ọrụ.
Ego nke ulo nke architects nke Republic of Poland
Ka IARP rụọ ọrụ, ọ dị mkpa ịrụ ọrụ ụfọdụ. Maka nzube nke itinye ego n'ọrụ ya, berlọ nke ụlọ nke Republic of Poland na-enweta ego site na ụgwọ ndị otu, site na mmemme azụmahịa, onyinye na ntinye ego, yana ego ndị ọzọ. Ihe omume aku na uba nke ndi ulo ime obodo na isi ulo ulo nke IARP nwere ike buru ihe amachaghi, agbanyeghi, o nweghi ike ibunye oru ego na ihe omume di iche iche. Ihe mgbochi dị otú ahụ kwesịrị ịbụ ihe ijuanya nye onye ọ bụla - ọrụ azụmahịa ekwesịghị imetụta nnwere onwe nke berlọ nke Architects nke Republic of Poland.
Slọ Silesian nke chitelọ Ọrụ Nhaziụlọ nke ndị na-ese iheoflọ ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ gdańskBerlọ ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ KatowiceBerlọ nke Architects Krakowụlọ nke ndị na-ese ụkpụrụ ụlọụlọ nke ndị na-ahụ maka ịbanye na nbanyeChamlọ ndị na-ahụ maka ụkpụrụ ụlọ LublinBerlọ nke Architects Olsztynụlọ nke ndị na-ese ihe owuwu poznańBerlọ ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ nke Republic of PolandChamlọ ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ nke Republic of PolandIlelọ Silesian nke Architectsụlọ nke ndị na-atụzi ụkpụrụ ụlọBerlọ nke Architects Warsawụlọ nke ndị na-ese ụkpụrụ ụlọchalọ ndị na-ahụ maka ihe osise nke alaBeródź berlọ nke Architectsụlọ ụlọ nke MachiteopolskaŁlọ ndị na-ahụ maka ụkpụrụ ụlọ MałopolskaMazovian Chamber nke ArchitectsOlọ ndị Masovian District nke ArchitectsOpole Chamber of ArchitectsChamlọ Polish nke ArchitectsPomeranian berlọ nke ArchitectsIlelọ Silesian nke ArchitectsSilesian District Chamber of ArchitectsWielkopolska ụlọ nke ArchitectsWest Pomeranian ụlọ nke Architects